Yekusimudza mota yekugadzirisa ramp inogona kusimudzwa, dhizaini nyowani, nyore kushandisa, inonyanya kushandiswa kugadzirisa mota, kushandisa chishandiso ichi kunogona kusimudza kukwirira kwemotokari, vashandi vanochengetedza zviri nyore kugadzirisa mota.
Iyo chigadzirwa i115cm kureba uye inogona kusimuka uye kuwira mukati meiyo 25-38cm. Iyo yakagadzirwa nesimbi uye iyo imwe huremu ndeye 19-25kg.
Gadzira mota ramp yekutsiva sevhisi yekuita basa ramp inoshanda nyore uye zvine mutsindo pazasi pemotokari
Lawn roller inoenderana nekudzima kukuvara uye nekubatsira kutanga nyowani yekukura kwehuswa hwakakwana, hune hutano. Sarudzo yekutanga yemotokari yekunze yekuzorora, iri nyore, inoshanda uye inoshanda. Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza Usati wadyara mbeu yehuswa nyowani, girazi rinotenderera rinogona kubatsira kuyera nzvimbo isina kuenzana. Mushure mekudyara, kutenderera kunobatsira kumhanyisa kumera nekuona kuti mbeu inosangana nevhu. Shandisa girazi rakazara nemvura rakazara mvura kuti ubatsire sodhi nyowani kuti isimbiswe, kubvisa homwe dzemhepo uye kuona midzi ichisangana nevhu. Kana makonzo nezvipembenene zvakuvadza huswa hwako, girazi rinotsemuka lawn rinobatsira kutsikisa tsangadzi kuti dzienzane.
Sarudzo yekutanga yemotokari yekunze yekuzorora, iri nyore, inoshanda uye inoshanda. Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa mune dzakawanda nguva dzekunze dzekuzorora, sekuenda kupaki kupikiniki, kuenda kunze kwekunze kunogona kushandiswa kutakura zvimwe zvekudya, mvura, zvekushandisa zvichingodaro. Enda kumunda kupenda, zororo, nezvimwe zvinogona kushandiswa kurongedza zvinhu zvinodiwa, zviri nyore kushandisa.
Gadzira mota ramp yekutsiva sevhisi yekushandira ramp inoshanda nyore uye inononoka pazasi pemotokari .Yakagadzirwa yakasimba, nyore kutarisirwa polyester, Yakasimba simbi furemu - Mavhiri anokurumidza-kusungira sisitimu ,, Kufananidza coupling neMesh inoisa Ita shuwa Kwakanaka Mhepo Kutenderera, Ine kumberi uye gonhi rekumashure, mhepo inotenderera uye inodzivirira mvura musuwo repamberi, Upper Mesh Net ine yakavharika yakavharika; ine mitsara inoratidzira uye inoratidzira
Hwakanaka mhando, inoshanda uye yakapusa, hombe inobereka inokwana, hupenyu hwakareba hwebasa, gungano rakanaka.
PU mavhiri isarudzo inozivikanwa mukushandisa kwemaindasitiri nekuda kwekunyarara kwavo mukuita kana ichienzaniswa nemavhiri akaomarara simbi kana simbi yakakandwa. Iwo PU mavhiri seanoshamisira absorber uye inobatsira kukwira kukwira. Inotora zvakare mapundu kubva munzvimbo dzisina kukwana. Kushandisa PU vhiri panzvimbo yesimbi kunogona kudzikisira zvakanyanya ruzha mazinga kubatsira kudzivirira nzeve dzevashandi vako.
Concrete chisanganiso Rori, Caster Wheel, PU Wheel, China Kongiri Musanganiswa, China PU Wheel, China PU Furo vhiri,